Ihe niile gbasara Brazil - Ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee | Njem zuru oke
Brazil bụ obodo dị na South America. Ọ bụ nke ise kachasị ukwuu n'ụwa. N'ime ya, anyị enweghị ike ịhapụ Rio de Janeiro, nke nwere Kraịst Onye Mgbapụta ma nọrọ dị ka otu n'ime obodo mara mma kachasị mma na-agwakọta ọdịnala na ọdịdị mara mma. N'aka nke ọzọ, Sao Paulo bụ ebe akụ na ụba na obodo a na-achọsi ike na njem nlegharị anya nke jikọtara oge ntụrụndụ na ọtụtụ ihe ncheta iji gaa, dịka Katidral Sé ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk, n'etiti ndị ọzọ.
Isi obodo ya bụ Brasilia juputakwara n'ogige ntụrụndụ iji gaa yana Katidral Metropolitan ya ma ọ bụ Plaza de los Tres Poderes. N'ezie, ọ bụrụ na nke gị bụ nke okike, yabụ na ị gaghị echefu Iguazu Falls kwa. Na mgbakwunye na mpaghara akụkụ osimiri nke anyị nwere ike ịkọwapụta nke a maara dị ka Florianópolis ma ọ bụ Lopes Mendes na oke osimiri kachasị mma, ma ọ bụ ọdọ mmiri nkịtị, na coral coef anyị ga-ahụ na Galés de Maragogi.
Ebe ndị ọzọ a na-ahụ anya na Brazil bụ Lençois Mahrenenses, ebe mmiri na ọzara na-ebikọ ọnụ, ma ọ bụ obodo Ouro Preto, tinyere n'okporo ámá ndị gbara agba na-eme ka anyị nwee obi ụtọ ịlaghachi azụ n'oge. Na-echezọghị Gramado, nke nwere ọdịbendị ọdịnala pụrụ iche, ebe ọ dị ka ọdịnala German abiala.
Brazil na-abụ obodo kachasị acha akwụkwọ ndụ na South America, ala nke nnukwu oghere dị iche iche na ...
Brazil nwere nnukwu mmanya dị iche iche na mmanya dị iche iche. Otu n'ime ha bụ capeta, ...
Mara Mara Oke Atọ Atọ: Argentina, Brazil na Paraguay
The trifinium bụ mpaghara ebe ókè ala nke mba atọ dị iche iche dabara. Otu n'ime ndị kasị ama bụ ...
Halloween na Brazil: ụbọchị nke ndị amoosu
Omenala nke Halloween, nke a na-eme n’abalị nke Ọktoba 31, gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na ụfọdụ mba Anglo-Saxon ...
Ọ bụ ezie na ọ bụ mba nke ise kachasị ukwuu n'ụwa na nke isii kacha nwee ọnụ ọgụgụ ụwa na ihe dịka 208 ...
Ihe osise obodo anaghị agbanahụ ihe ọ bụla anyị na-eme: ụlọ, ngafe zebra na ọbụna steepụ ...
Na ụfọdụ colonial obodo na cannons ka na-ehi ụra na ochie wusiri ike na agba nke mgbidi pụta ìhè a bit ...